ukudoba Summer phezu induku iflothi kusukela ogwini kwezinye izindawo ngokuvamile kunzima ngenxa izimila obukhulu. igiya Phonsa nje "ifasitela" noma ukutjheja imikhawulo umugqa yamanzi ovulekile futhi izitshalo ngesinye isikhathi akwenzeki. Yingaleso sikhathi, futhi basisize labadobi ngokudoba induku nge ikhanda ezilingene JIG. A induku ende, kungekho iflothi, ukunamathela ulwelwe kanye mkhosi okucacile okuhlabayo - akusiwona zonke izinzuzo zawo.
Kulesi sihloko sizoxoxa kuphi futhi kanjani ukusebenzisa ikhanda lateral, kanye indlela yokwenza igiya yabo yokudoba ehlobo JIG.
Yini luwumgogodla rod ukudoba ehlobo nge ikhanda lateral
Esikhathini buka labadobi kakhulu ukudoba JIG - umsebenzi ithatha ebusika, ngoba ngokuyisisekelo lokhu ukudoba elungile wiring lolo. Ukuze afeze le nqubo nge eside induku ehlobo cishe kungenakwenzeka. Kodwa eqinisweni, lutho nzima ngalo. Enough ukuba induku ende nokukhanya, okungaba isikhathi eside ukugcina esandleni, setha mormyshkas futhi ikhanda qualitative, okubonisa hhayi kuphela okuhlabayo, kodwa futhi ukudlala kuze lolo.
Ezivamile ukudoba izinduku ngesikhathi bedoba ehlobo, ifakwe iflothi, ungavumeli ukudoba ezindaweni ezinabantu embozwe ezimila emanzini, ikakhulukazi uma kuziwa ekubunjweni ibanga elide. Ngisho noma snap futhi liwele phansi, iflothi ngempela wehluleka noma ngavela ngayithanda.
Ukudoba induku nge ikhanda lateral - enye indaba. A induku ende ikuvumela ukuba "faka" ngesankahlu endaweni efanele, ngaphandle kwezinkinga JIG uwela phansi, futhi ikhanda kusiza play wakhe ngesikhathi ifomu kancane shaking.
Catch kwi efanayo ngenela emifuleni zamanje kancane, kanye amanzi amile. Njengoba for isikhala, izinhlanzi ohlangothini ehlobo we ikhanda kungenzeka noma kuphi, kokubili kusuka ogwini futhi osesikebheni. Kulo mBhalo, yebo, induku ende ayidingekile.
Lokhu igiya uphelele ngokudoba e snags futhi ezindaweni lapho zingaphansi kwamanzi izihlahla. Ifanele okudoba bese kuba eweni yokuzingela inhlanzi wangabaza like chub.
Luhlobo luni lwenhlanzi okungenzeka ezibanjwa ehlobo phezu JIG
Ukudoba nge JIG ehlobo kungaba iyiphi inhlanzi t. H. Futhi impango. Uma lena JIG evamile ne ukwengeza izimpethu, bloodworms noma Caddis, kungathatha futhi roach futhi carp crucian, futhi perch ngisho walleye. Lapho usebenzisa i-bezmotylki bangathembela ngokuphepha phezu chub yizinyoka, roach, carp crucian, carp, perch okufanayo.
Rod ukudoba ehlobo JIG
Lapho ekhetha induku, uqale indaba ukwakhiwa, ngoba lapha yezimbangela eziyinhloko kuyinto isisindo nalutho. Zincane, uyokhululeka ngokwengeziwe kuyoba lokudoba. Kungcono ngalezi zinhloso ukusebenzisa carbon fibre. Sisindvo induku ende kunazo le nto ingeqi 350 g
Manje, mayelana nomklamo. Ukudoba lateral ikhanda ehlobo kuhilela ukusetshenziswa ifomu telescopic. Ayikho i-plug-in nobe izinduku eziqinile azisetshenziswa. Njengoba ngobude ifomu, kumele kube okungenani 5 amamitha.
Nakani oda. Okuningi induku efanelekayo isinyathelo ngokushesha nge eside isiswebhu kanzima.
Azikho izidingo ezikhethekile lekhoyili kulolu hlobo lokudoba alikho. Ezinye Anglers ngokuvamile zisebenzisa motoviltse, kodwa ukubamba izinhlanzi ezinkulu, ezifana bream noma carp, kangcono ukusetshenziswa bezynertsionkoy. Buthani elinye imodeli engabizi nokuphathelene ukuze ubukhulu spool 2500-3000, kokuba ukubopha ukuhilizisana.
Njengoba umugqa oyinhloko kufanelekile kokubili monofilament futhi aluka umugqa. I ukujiya Kunconywa intambo - 0,2 mm, intambo - 0.15 mm. Esondweni kufanele nilimaza okungenani amamitha angama-30 ka-line ukudoba.
Kodwa ukuvuma ngekhanda nezidingo elawula kunazo, ngoba yonke impumelelo ngokudoba kuwo. Kufanele abe nezimo ngokuphelele okwanele ukuze ubonise ngisho bite abaqaphe kakhulu, kanye kuyaqina ethile, kusobala ukuthi JIG ezifanele isisindo.
Njengoba kunomzimba waso, kumele kube ezilinganiselwe induku: sikhulu kangakanani, isikhathi eside kumelwe abe ngokunqekuzisa ikhanda. Ngokwesibonelo, i-imitha-6 uyomenzela iqhude ephelele eside 20 cm.
Futhi omunye imfuneko - ke kufanele ibonakale ngenxa ezinemibala egqamile, siziqhathanise ne umbala ezungezile.
Senza kunikina elula plastic
Side ikhanda ukudoba ehlobo izinduku angathengwa at esitolo ukudoba, kodwa ungenza izandla zakho siqu. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze unqume ukuthi lo lolo izosebenza. Okungcono kakhulu, uma kungekho umthwalo iqondile futhi izimisele i-engela 90 degrees ngaphansi isisindo JIG. Ukuze siqhube novivinyo olunjalo, yebo, kubalulekile emva womshini.
The elula uhlangothi ikhanda zingenziwa amabhodlela abavamile plastic. Ukuze wenze lokhu, ukhethe ubude oyifunayo ibhodlela wanquma kuwo longitudinal usayizi workpiece 20h0,7 ukubona. Khona-ke omunye ekupheleni strip is yayizovela ku 0.3-0.5 mm nokucubungula lokukhuhla esihle Imi ukususa burrs. Manje thina ukuthatha okokubamba iphepha amancane yakha iluphu aphume ngayo amachopho amabili ulwazi ndawonye. Lokhu kuyoba ukuphela kwethu "Tulip". Lokhu primatyvaem iluphu kuze kube sekupheleni emincane olandelayo ikhanda ngentambo uxhumano bayigubungele nge namanzi ingcina. Ukuphela ikhanda Kunconywa ukuba ababethi obomvu noma orange, kangangokuba kwaba kulula ukubona. Lokhu kungenziwa evamile nail sula.
ikhanda Plastic besizwe nenduku yokudoba ubudala
ikhanda denser ingenziwa ubudala noma eziphukile telescopic induku ukudoba ehlobo. Ukuze wenze lokhu, nqamula omunye ngamadolo obucayi kakhulu futhi usike isiqeshana aphume ke usayizi eshiwo. Lungisa ububanzi at isisindo ezithile JIG. Ekupheleni Lodge iluphu unamathisele Ukugunda njengoba kuchaziwe ngenhla. Penda ekupheleni komunye imibala bhá (obomvu, ophuzi, owolintshi).
Indlela yokwenza ohlangothini endala ikhanda roulette
Ukuze mormyshkas ngoyisiwula kusinda zidinga ngaphezulu ikhanda kanzima. Kungcono ukwenza ke nomzimba omncane springy steel ishidi. Kodwa lapho ukulithatha, ubuza? Okuhle ikhanda lateral etholwe kusuka ezivamile ukwakhiwa roulette. Lapha, ngisho ubude ngesilinganiso akudingeki - uholwe esikalini ekhona. Metal sikelo ukusika workpiece ne Ubukhulu eshiwo ngenhla, kanye ngokucophelela aphathe lokukhuhla. Ububanzi emapheshana zingenziwa ezincane, ngoba kwabantu steel iphakeme kakhulu kunanoma plastic. Batfola ikhanda by anamathisela ukuphela ezondile emgqeni ne JIG. Uma ngaphansi kwakhe isisindo iqhude bent, uku emgqeni.
Ngemva ukugaya, unamathisele ukuphela ezondile loop besiqephu futhi uyipende ngemibala egqamile.
Kanjani unamathisela ukuvuma ngekhanda isiswebhu
Manje, uma ikhanda design waqonda, luhlala ukuthola indlela ukukulungisa amathiphu. Indlela elula - ukwenza kube ziphephule perpendicularly futhi primotat izindikimba, bay uxhumano glue amanzi. Kodwa le ndlela nakanjani ezingafaneleki, ngoba kuzobanga izinkinga nalapho bethutha izinduku. Ake sicabangele izindlela ezimbalwa.
Ungathatha ubude ukwahlukanisa iraba, okuyinto osetshenziselwa Sizing of iminyango namafasitela. Enkabeni yalo nomzimba omncane tube nezimo ne unxande cross-section. Ukuphuca ucezu ubude uphawu 3-4 cm, wagqoka ichopho induku yayo. Ate ke ihlala akuyona Friend, isalothephu lenkhulu mastic engaphansi kwalo.
Ngemva kwalokho, engxenyeni engenhla uphawu nge nommese noma ummese ngensingo ebukhali futhi mncane kwenza sebeziqhumbuza ovundlile eside 0.5-0.8 cm. Basuke wafaka iqhude yethu, Orient Uphela ohlangothini oyifunayo.
Uma isihloko senduku akuyona "Tulip", ungasebenzisa kwihendisethi kude weThrojani noma yimuphi omunye tube efanayo esikhundleni uphawu. Uma ifakwe isiswebhu "Tulip" ukuthatha cocktail tubule, nginqume 3-4 cm ucezu zakhe ezinde bese ufaka bayifaka umfantu phakathi indandatho kanye tip. Bagencetisa amahlumela efonini bese ulungele ngenela cishe.
Ukudoba lateral ikhanda ehlobo zizosebenza kuphela uma Ukukhetha ngempumelelo izicupho. Lapha ubuswa izizathu ezine:
Ukukhetha JIG, khumbula ukuthi imodeli ehlobo kancane ebusika, ngakho akudingeki ukuba ube namahloni ubukhulu, uma nje kuphela singawusebenzisa lapha asikhulumi ngama-ekubambeni phezu zigeleze Tungsten onobuhle. Kodwa, ngenxa yokuthi uhlobo kwethu ukudoba hhayi esetshenziswa imisinga enamandla setama mormyshkami lomthofu futhi Alloys yayo.
Ukuze ukudla okuhlukahlukene ezivamile thina yeka incazelo yefomu, njengoba benjalo, ingxenye enkulu abe ukuma isiyingi noma okusaqanda. Kubo, into ebaluleke Akukhona ukubukeka, kodwa ukuthi ivuliwe hook.
Kodwa mormyshkas-bezmotylok ehlobo ifomu nombala - zezici juqu. Phakathi nale nkathi, isidingo ukugxila ekudleni engokwemvelo inhlanzi, ngoba ehlobo - hhayi isikhathi elambile kakhulu kuye.
ukudoba Summer ohlangothini we yokuzanyelwa bream futhi roach iphumelela lapho esetshenziswa bezmotylok imibala ebomvu, olintshi yellow, kanye inhlanganisela yabo nge black. Ukuze chub imibala emnyama ivumelane ezingaphezu kuka brown, gray, abamnyama.
Karas ohlangothini kunikina asabele kangcono uma lolo kodwa lolo sizoqukatha okuvela ezilwaneni, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa ezivamile ukudoba JIG.
Mayelana ifomu lolo nakanjani into singasho, ngoba zonke izinhlanzi zifana ziyakukhetha kakhulu ehlobo. Nokho, uma isandla uyoba iqoqo mormyshkas ehlobo, kuhlanganise kokubili onobuhle ezivamile ukudoba nge lolo kanye bezmotylki ezihlukahlukene: "amademoni", "izintuthwane", "imbuzi", "iconsi", "Uralcom," etc ...
Izindlela ngoba lolo ukudoba ehlobo nge ikhanda lateral
Uma kukhona igiya jikelele ukudoba ehlobo, lo JIG ehlobo. ikhanda ecaleni ivumela ukudoba kusukela ogwini, futhi vzabrod, futhi izikebhe. Catching vzabrod kubhekwe siyisinqumo esinzima kunazo zonke, ngoba idinga ekukhuthazeleni Angler nokubekezela. Ngaphezu kwalokho, kudingeka ume emanzini, gcina induku ende esandleni, kumelwe futhi ozama ukuwufeza wiring lesifanele. Ukudoba kusukela ogwini lubelula, lapha okungenani sikwazi ukwandisa yabo ngenela kanye lolo.
Indlela elula ukudoba osesikebheni: ilungelo lokukhetha indawo futhi kulula, futhi induku ende bese ize. Ukudoba enjalo azodinga ifomu emifushane (1.5-2 m), isinyathelo okusheshayo nge isihloko elukhuni. Zonke ezinye izidingo zizokwenza efanayo ngoba nenduku yokudoba isikhathi eside kunikina lateral.
imishini yokudoba ohlangothini ehlobo ikhanda
Ukudoba ehlobo JIG, kukhona izinhlobo eziningana ukuthengiselana:
Ngo ezivamile mpo wiring snap efakiwe endaweni efanele ngosizo induku. Sashintsha kancane kancane olubi phansi. Ukuphakamisa JIG made easy ukunyakaza mpo iqondiswe phezulu, nokulondoloza kumiwe 1-2 ne zonke 10-15 cm. Ngemva kwalokho snap babuyela phansi futhi inqubo okuphindaphindiwe.
Wiring mpo tautly ikakhulu kwenziwe khona ukugeleza encane. Lokho kuyasiza mormyshke ukukhiqiza kunyakaza ukuthi ukuheha izinhlanzi. Ngenxa yalesi snap ethunyelwe phansi, bese kancane zokulenga ibanga 7-10 cm, futhi ngakho ubanjwe amasekhondi angu-5-10, ngemva kwalokho inqubo iyaphindwa.
Uma udlala ngeminwe yakho inqubo efanayo, kodwa ngesikhathi Angler ukunyukela eminye "ujike-Ons" Bait elincane u- umunwe wakhe line ukudoba esukela ikhoyili kumbe motoviltse, edonsa futhi ukukhulula khona.
Jerk Eqondisayo ukuthi JIG is sehliselwe phansi ngezinyathelo ezimbili: Engxenyeni yokuqala, ngemva kwemizuzwana embalwa ngokuphelele. Yibe usubhala abukhali bedlondlobala ukuba 30-40 cm, balandela ngokuphinda umjikelezo.
Phansi ovundlile wiring JIG kuhilela kunyakaza kanye ebusweni phansi at ibanga 10-15 cm kuwo, eyalo twitches induku melkoamplitudnyh indiza ovundlile.
Ukuhudula lolo phansi kungenzeka kuphela endaweni evulekile izitshalo emanzini echibini. Jig is sehliselwe phansi whereupon induku kancane bamqhuba, ukudonsa lolo phezu phansi.
Izintambo zikagesi ezisobala Passive yakhelwe Anglers lazy abangafuni ukukhuthaza JIG umdlalo. Ungasebenzisa ezimbili okufanele akhethe kuzo: ukwehlisa isiyengo ukuze phansi, ngakho-ke nje walala khona, noma vpolvody - hhayi eqinile ngaphakathi zintengantenga wakhe.
Lezi zincomo ezihlobene kukhethwa JIG, futhi indlela amasu ukudoba, akukwazi esibophezelayo. Noma yimuphi ukudoba - uhlobo ukuhlolwa lapho umdobi, ngisho lukhuni kakhulu, uthola ulwazi oluthile ukuthi singaba usizo kabi ngesikhathi esilandelayo uma.
Ngakho ukhululeke uzizamele ukudla okuhlukahlukene futhi amasu lokudoba. Okuwukuphela kwendlela yokuthola ukuqonda zonke izimfihlo lokhu ekilasini elithakazelisayo ngokuthi "wokudoba".